Vavaka isan'andro ho an'ny zanako | TOKO VAVAKA
Home vavaka Vavaka isan'andro ho an'ny zanako
Androany isika dia hiatrika vavaka isan'andro ho an'ny zanako. Milaza ny soratra masina fa lova avy amin'Andriamanitra ny zanaka, fanomezana sy fitahian'Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreniny izy ireo. Fantatry ny fahavalo fa Andriamanitra dia mametraka foana talenta sy fanomezana sasany amin'ny fiainan'ny zaza rehefa teraka izy ireo ka izany no mailo hatrany ny fahavalo hanafika ankizy. Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia tsy voatery hitrosa ianao ankizy adidy fikarakarana amin'ny fividianana zavatra ho azy ireo, adidinao amin'ny vavaka hatrany no tokony hataonao. Ny fahombiazan'ny zaza tsirairay dia miankina amin'ny ray aman-dreniny. Rehefa misy laxity eo amin'ny toerana fivavahana ho an'ny ankizy dia tsy ho lavitra ny fahavalo hitokona.
Andao horaisintsika ho toy ny tranga fandinihana ny ain'i Samoela. Talohan'ny niterahan'i Hana an'i Samoela dia vehivavy momba izy. Nesoesoana izy satria momba ary tena nivadika ho azy tokoa. Vokatr'izany dia nivavaka ho an'ny vokatry ny kibo izy, tsy nitsahatra nivavaka i Hana raha tsy nahazo ny valin'ny vavaka nataony sy ny taona niandrasany. Mandritra izany fotoana izany, na dia mbola tsy teraka akory aza i Samoela, dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra i Hana fa raha esorina ny henatra sy ny latsa ary torontoronina izy, dia hanompo an'i Jehovah ilay zaza. I Hana dia renim-pianakaviana marika afo izay mahalala fa ny zaza entiny dia fanekena ary tsy nitsahatra nivavaka ho an'ny zanany izy. Afaka nanodinkodina ny anjaran'i Samoela ny devoly raha toa ka natory teo amin'ny toerana fivavahana i Hana. Mivavaka amin'ny herin'ny lanitra aho mba tsy hananan'ny fahavalo fahefana amin'ny zanakao.
Ny zanakalahin'i Eli dia ohatra tsara dia tsara amin'ny laharam-pahamehana, ny rainy dia pretra fa tsy nahalala an'izany ny ankizy. Voatazona be loatra tamin'ny adidin'ny fisoronana i Eli ka nanadino ny fikarakarana tokony hananany ny zanany, ny fidiran'ny devoly tamin'ny fiainany ary ny fiafaran'izy ireo dia tantara efa mahazatra. Mampalahelo fa tsy nianjera irery izy ireo, nidina niaraka tamin'ny rainy, Eli, mpisorona lehibe. Midika izany fa rehefa tsy mahavita ny adidintsika isika hivavaka ho an'ny zanatsika amin'ny maha-ray aman-dreny antsika dia hamely antsika amin'ny alàlan'ny zanaka tsy nivavahantsika ny fahavalo. Ho an'ireo rehetra izay mamaky ity torolàlana am-bavaka ity dia mivavaka aho mba tsy hananan'ny fahavalo ny ain'ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ran'ny zanak'ondry no hanoherako ny drafitra sy ny fandaharam-potoanan'ny fahavalo momba ny zanakao, ary manome didy aho fa ny torohevitr'Andriamanitra irery ihany no hijoro ho an'ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy.
Tadidio foana fa eo am-pelatananao ray aman-dreny ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny zanakao. Rehefa tsy mivavaka ianao dia handroba ny zanakao ny fahavalo. Manome didy aho fa ny devoly dia tsy hamabo ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy.
Ry Jesosy Tompo ô, tonga androany Aho noho ny amin'ireo zaza nomenao ahy, rehefa hivoaka izy ireo anio, mivavaka aho mba ho voaro aminy ianao. hoy ny mason'ny Tompo mitsinjo ny marina foana ary ny sofiny mihaino tsara ny vavak'izy ireo. Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hahita azy ny masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy aho fa ny tananao mpiambina dia ho amin'ny zanako na dia mivoaka androany amin'ny anaran'i Jesosy aza izy ireo.
Fa voasoratra hoe: Aza misy manahirana ahy, satria mitondra ny mariky ny Kristy aho. Mandidy aho fa rehefa handeha anio ny zanako dia tsy ho taitra izy ireo. Izay fahefana na andian-tafiky ny fahavalo hanohitra azy ireo dia tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Nampanantena tamin'ny teninao ianao fa izaho sy ny zanako dia ho famantarana sy fahagagana, mivavaka aho mba hanombohanao haneho ireo fahagaganao be voninahitra amin'ny fiainan'ny zanako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hisy lamaody fitaovam-piadiana hamelezana ny zanako amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho ny amin'ny ho avin'ny zanako, manapa-kevitra aho fa tsy hanan-kery amin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy ireo. Tompoko, ny mpahita ratsy rehetra izay nahita ny famirapiratan'ny zanako ary nanapa-kevitra ny hampamirapiratra ny jirony, dia mivavaka aho mba tsy hamelomanao ny fahavalo toy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jesosy Tompoko, izay andian-jiolahim-boto rehetra na fivoriana mifanohitra amin'ny fitomboan'ny zanako sy ny fivelaran'ny zanako dia aparitako amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangàna, Tompoko, ary aelezo ny fahavalonao; avelao izay mitsangana hanohitra ny zanako hitsara amin'ny anaran'i Jesosy.
Manomboka izao dia mivavaka aho mba hambinina amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra apetraky ny zanako tanana. Ireo izay mbola mianatra, izaho noho ny fahalalana fahendrena, ary ny fahazoako azy ireo hitrandrahana, mivavaka aho mba homenao azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao no namorona ny zava-drehetra tamin'ny alàlan'ny loharanon'ny hazavana sy ny fahendrena, ianao no mpanorina ny zava-drehetra, nandidy aho fa ny hazavan'ny fahalalanao dia hanazava ny aizim-panahin'ny zanako, hanokatra ny lohan'izy ireo ianao mba hamono haingana kokoa ny anaran'i Jesosy.
Mivavaka aho ho an'ny zanako izay efa niditra an-tsehatra tamin'ny herin'ny asa, mivavaka aho mba hambinina amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra ametrahan-tànany. Amin'izay rehetra nolavin'izy ireo dia manafatra aho fa ny famindram-pon'ny Avo Indrindra dia handeha hanambara azy ireo hahita fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, inona no soa azon'ny olona mahazo izao tontolo izao nefa very ny fanahiny? Voarakitra ao amin'ny soratra masina fa tsy misy na inona na inona azo ampiasaina amin'ny fifanakalozana fanahy very. Mivavaka ho an'ny zanako aho mba hanomezanao azy ireo fahasoavana hijoro miaraka aminao hatramin'ny farany, na inona na inona hitranga, haharitra eo imasonao amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo.
Previous lahatsoratraVavaka ho an'ny fahombiazan'ny zanako vavy
Next lahatsoratraVavaka ho fanafahana amin'ny sigara
Teboka vavaka hanoherana ny ozona ratsy
20 Mahereza tsy matotra ireo teboka amin'ny vavaka